avira primium 92 day keys — MYSTERY ZILLION
avira primium 92 day keys
October 2009 edited October 2009 in Antivirus & Virus
avira က ပ၇ုိမိုးရှင်းအနေနဲ့ ပ၇ီမီယံကီးကို 3လ သက်တန်းဖ၇ီးပေးပါပြီတဲ့။ အောက်ကလင့်လေးကိုသွား
ဖောင်လေးဖြည့်ပြီး၇င် account reviews ကို၀င်လိုက်တာနဲ့ ကီးေ၇ာ ဆော့၀ဲပါဒေါင်းဖို့ပေးထားပါတယ်
ကျွွန်တော်တော့ဒေါင်းပြီစမ်းနေပြီ အဆင်တော့ပြေတယ် ။
လိုင်စင်သက်တမ်းကို20.1.2010 မှာကုန်မှာဆိုတော့ ဒေါင်းသမျှတော့ အဲဒီမှာအကုန်သက်တမ်းကုန်မယ်ထင်တယ်ခင်ဗျ။
ကျေးဇူးပါဗျာ....အရ ယူသွားပါဘီ :d
:1::1:Thank you Very Much My Bro !!~~~~:1::1: For sharing!!!!
Thanks for your sharing !!!:):):)
ကျေးဇူးပဲဗျာ. ကျွန်တော်လည်း အရင်ကတည်းက Avira ကိုစမ်းသုံးမလို့ဆိုပြီး..လုပ်နေတာ.မစမ်းဖြစ်သေးဘူး အခုတော့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတော့ စမ်းဖြစ်အောင်ကိုစမ်းသုံးလိုက်အုံးမယ်.နော်...
thanks u so much for ur sharing.........
Avira ဆော့၀ဲလေးရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ပြောပြပါဦး
ကျွန်တော်က Kaspersky သုံးပါတယ် ပြောင်းသုံးသင့်ရင်လည်း သုံးရအောင်လို့ပါ
yanaungmyo wrote: »
ကောင်းပါတယ်...တစ်ချိန်တုန်းကတော့ ကျနော်လည် ကပ်စပါရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦးပါ....
သိုပေသိ...နောက်ပိုင်းမှာ ကပ်စပါက နည်းနည်းပေါ့လျှောလာတယ်လို့ခံစားမိရတယ်...
အဲဒါနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပေါ့တေးဘဲလ် လေးနဲ့ စမ်းကြည့်တာ...တော်တော်လေး ကြိုက်သွားတယ်...
ဒါပေမဲ့ keygen တွေ၊ patch တွေ ကုန်ပါရောလားဗျာ...
ကျွန်တော်တော့မသုံးဖူးပါဘူး သိရသလောက်ကတော့ပေါ့ပါးတယ် မြန်ဆန်တယ်
နောက်ပြီးတော့ kasper လိုတွေ ့သမျှ virus လို ့မအော်ပါဘူး kasper လိုစျေးမကိုင်ပါဘူး
blacklist တွေဘာတွေလည်းမသိပ်မတွေ ့ရဘူး:):):)
နောက်ပြီးတော့ kasper လိုတွေ ့သမျှ virus လို ့မအော်ပါဘူး
ဟုတ်လောက်ဘူးနော် လိပ် .... Software တွေကို ဝယ်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သတိထားပါဗျာ... keygen ,crack ,patch လေးတွေ Avira ရှေ့ ချကြွေးကြည့်ပါလား ... :D:D အသံတော့ ပိတ်ထားနော် နောက်ပြီးတော့ exe နဲ့ သုံးရတဲ့ portable အသေးလေးတွေတချို့ လဲသူနှိပ်စက်လို့ ကုန်ဖူးပါရဲ့ ..... ထီးနီတို့များဝေးဝေးရှောင်ပါ့အဲ့ဒီထဲက ကိုကတွေ့သမျှဒေါင်း ပီးရင် keygen ,crack ,patch လေးတွေ နဲ့သုံးနေရတဲ့အပြင် portable အတိုအစလေးတွေလဲ လက်မလွတ်လေသောအခါ... ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း သုံးရဲဘူး ... ကပ်စပါလေး ကမှမိုက်ထှာ ကိုယောင်ပေးတဲ့ ရီစက်တာလေးနဲ့ညိမ်ပါ့ ... :P
ဟုတ်ပါ့ kasper လိုတွေ့သမျှ virus လို့မအော်ဘူး ပြန်မမေးဘူး။ တခါထဲကိုအပီကိုင်ထည့်တာ။ အကုန်ပြောင်သွားတာပဲ။ ရှိသမျှကီးဂျင်တွေ။ ဆော့ဝဲကုမ္မဏီစီအီးအိုတွေ ကထောက်ပံထားသလားမှတ်ရတယ်။ အကုန််အပျောက်ရှင်းတာပဲ။
ကျွန်တော်လည်း kasper ပဲသုံး တာပါ.ကပ်စ်ပါကို.. ခရပ်ဖိုင်လေးနဲ့ တွဲသုံးတော့ blacklist ဖြစ်မှာလည်းမပူရတော့ဘူး..လေ.. avira အကြောင်းကိုတော့ ကောင်းကောင်းမသိသေးပါဘူး.. သူများတွေပြေသံကြားတာတော့ exe မှန်သမျှကို ဆော်ပြစ်လိုက်တာလို့ပြောတာပါ....
နောက် expired ဖြစ်သွားရင်လည်း နောက်ထပ် key တွေထပ်တင်ပေးပါအုံးလို ံ့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ....:):)
အဲဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကီးဂျင်တွေကို rar နဲ့ချုံ့ password ပေးထားလိုက်တယ် ။ကျွန်တော်စက်တွေကို kaspersky ၇ယ် avira ၇ယ် တွဲတင်ထားလိုက်တယ်။အဆင်ကိုပြေလို့ စက်လဲမလေး။ crash မဖြစ်ဘူးဗျ လာချင်တဲ့ဟာလာ kasper နဲ့စစ်ချလိုက် avira ကနောက် ကနေ ခွီးခွီး နဲ့လိုက်ဆော်သဗျ။:D:D
ဟုတ်လောက်ဘူးနော် လိပ် .... Software တွေကို ဝယ်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သတိထားပါဗျာ... Keygen ,crack ,patch လေးတွေ avira ရှေ့ ချကြွေးကြည့်ပါလား ... :d:d:d အသံတော့ ပိတ်ထားနော် နောက်ပြီးတော့ exe နဲ့ သုံးရတဲ့ portable အသေးလေးတွေတချို့ လဲသူနှိပ်စက်လို့ ကုန်ဖူးပါရဲ့ ..... ထီးနီတို့များဝေးဝေးရှောင်ပါ့အဲ့ဒီထဲက ကိုကတွေ့သမျှဒေါင်း ပီးရင် keygen ,crack ,patch လေးတွေ နဲ့သုံးနေရတဲ့အပြင် portable အတိုအစလေးတွေလဲ လက်မလွတ်လေသောအခါ... ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း သုံးရဲဘူး ... ကပ်စပါလေး ကမှမိုက်ထှာ ကိုယောင်ပေးတဲ့ ရီစက်တာလေးနဲ့ညိမ်ပါ့ ...
ထီးဆိုတာနဲ့ ကြောက်တတ်နေဘီထင်တယ် ဟိဟိ :71:
သူက ထီးနီကိုဒီလောက်မကြောက်ဘူး ထီးပြာကိုုပိုကြောက်တာ.... လာပြီဆိုတာနဲ့ပြေးပြီပဲ။ :d
ကျွန်တော် လည်းပွသွားပြီဟီဟီ..အလကားရတာလေးတွေ ရော့ကာ ကိုလည်းပြောကြပါ.နော့်